ပြည်မြို့မှ ကချင်ပြည်နယ်အထိ ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု လမ်းလျှောက်သူနှစ်ဦးကို အောင်လံမြိ - Yangon Media Group
ပြည်မြို့မှ ကချင်ပြည်နယ်အထိ ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု လမ်းလျှောက်သူနှစ်ဦးကို အောင်လံမြိ
အောင်လံ၊ မေ ၇
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြို့မှ ကချင်ပြည်နယ်အထိ ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုလမ်း လျှောက်သူနှစ်ဦးကို မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အောင်လံမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ မေ ၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီ မိနစ် ၄ဝ တွင် အောင်လံမြို့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းရှေ့၌တားဆီးကာ ပြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးလိုက် ကြောင်း သိရသည်။
”ရဲစခန်းကို ပြန်လည်လွှဲပြောင်း အရေးယူခဲ့တာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မနက်ကပါ။ ငြိမ်းစုစီဥပဒေ ပုဒ်မ- ၁၉ နဲ့ အရေးယူတာပါ။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စီတန်းလှည့်လည်လို့ပါ”ဟု ပြည်မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအ ရာရှိတစ်ဦးက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မေ ၇ ရက်က ပြောသည်။ ပြည်မြို့မှ ကချင်ပြည်နယ်အထိ လမ်းလျှောက်သူနှစ်ဦးမှာ ပြည် မြို့ဒေသခံ ကိုမျိုးသူထွဋ်နှင့်ကို မေတ္တာဦးတို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် မေ ၆ ရက် နံနက် ၈ နာရီတွင် ပြည်မြို့ ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစီးရုပ်တုရှေ့ မှစတင်ကာ ကချင်ပြည်နယ်အထိ လမ်းလျှောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ”ပြည်မြို့ကနေ ကချင်ပြည်နယ်အထိ လမ်းလျှောက်တာပါ။ ကျွန်တော့်ကို ပြည်မြို့မှာလည်း တားခဲ့တယ်။ အခြေခံဥပဒေကို အုပ်ချုပ်ခံရသူပြည်သူတွေ လိုက်နာသလို အုပ်ချုပ်သူကလည်းလိုက် နာရမှာပါ”ဟု ပြည်မြို့မှလမ်းလျှောက် လာသူ ကိုမျိုးသူထွဋ်က ပြောသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် လမ်းလျှောက်လာသူနှစ်ဦးမှာ အောင်လံမြို့နယ်သို့ မေ ၆ ရက် ည ၇ နာရီကရောက်ရှိကာ အောင်လံမြို့နယ် ကသစ်ကန်ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်း၌ ညအိပ်ရပ်နားပြီး မေ ၇ ရက် နံနက်မှစတင်လမ်း လျှောက်လာရာ အောင်လံမြို့နယ် ပြည်လမ်းအတိုင်းလမ်းလျှောက် လာစဉ် အောင်လံမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းရှေ့၌ တာဝန်ရှိသူများမှတားဆီး၍ ပြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှား မှုလမ်းလျှောက်သူနှစ်ဦးကို ပြည် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ ငြိမ်းချမ်း စွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဥပဒေဖြင့် အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးတွင် လေးလအတွင်း မီးဘေးကြောင့် ငွေကျပ်သန်းပေါင်း ၁၇ဝဝ ကျော်ဆုံးရှုံ??
အသက်(၁၄)နှစ်အရွယ် ကလေးကို ရိုက်နှက်သော ဆရာတော်အား အမြန်ဆုံး အရေးယူပေးရန် မိသားစုဝင်များ သတင
နိုင်ငံ့ ဂျီဒီပီ တိုးတက်ရန် မျှော်မှန်း၊ လုပ်ငန်းများကို ဟန်ပြမလုပ်ဘဲ ပြည်သူ့အတွက် အကျိုး??
ဝန်ကြီးဌာနမှ ရသည့် ဘတ်ဂျက်ငွေ လျော့နည်းသဖြင့် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင် ပျူမြို့ဟောင်း ထိန?